Ukuthuthukiswa innovative umkhakha kungase kubhekwe njengokwelapha eqakathekileko isimo esitebeleni kwezomnotho kunoma yiliphi izwe. Nokho, akubona bonke ukulungiswa yenqubo noma umkhiqizo akunakubangelwa kulesi sigaba, ngakho-ke kusuke kukufanelekele ngokugxila eningiliziwe izinhlobo emisha kanye nomphumela ngezigaba zabo.
Kuye ngokuthi lakhiwe kanjani emisha luzoqala ku inqubo, ukwaba emisha:
Esimweni sokuqala, izinto ezintsha, imikhiqizo ephuma kabili isiqediwe futhi izingxenye, kanjalo ekukhiqizeni imikhiqizo entsha ngokuphelele. Inqubo emisha zihlanganisa izindlela ezintsha kokubili inhlangano ibhizinisi, futhi ukwethulwa entsha ephezulu ubuchwepheshe.
Ukwahlukanisa emisha kungenziwa eliqhutshwa kuye emakethe eseyintsha. Ikakhulukazi ukwaba ucwaningo nentuthuko, eyabonakala okokuqala emhlabeni, ekhaya phezu ibhizinisi elithile. Ngokusobala, obuyigugu kakhulu has uhlobo lokuqala. Ngesikhathi esifanayo, kuye ngokuthi umbiko we olulindelekile share emakethe, ngezinye izikhathi ingaba umthombo wendawo, eluhlelweni kanye nesu.
Ukwahlukanisa kungenziwa okusekelwe oqanjwe kabusha esisha ohlelweni ibhizinisi. Izinhlelo ezinjengalezi yesayensi ungenza izinguquko isakhiwo kanye imodi okusebenzela kuyo ibhizinisi uqobo. Lapha ukwaba emisha:
ibhizinisi okokufaka, okuyinto ukuguqula isicelo izinto zokusetshenziswa, imishini, izinto ezisetshenziswayo kanye nezinye amaphuzu abalulekile esigabeni sokuqala ukukhiqiza;
ekhishwa ibhizinisi - sinomthelela umphumela wokugcina womsebenzi ukukhiqizwa;
isakhiwo uhlelo ibhizinisi, shintsha ukuphathwa, ukukhiqiza futhi izingxenye zobuchwepheshe
Ukwahlukanisa emisha kuncike ushintsho umkhiqizo. lapha elingalodwa
olukhulu (eziyisisekelo), okuyinto ngokuphelele ukushintsha ikhwalithi yamasevisi noma emphahleni. Lapha, ngokomthetho lwenteke okutholakele ezinkulu ezisunguliwe, okuvumela ukuqala ukukhiqizwa isizukulwane esisha ubuchwepheshe noma liqalise ubuchwepheshe bamuva;
enhancers, okuyinto zisetshenziswa ukusebenzisa maphakathi no-level okusunguliwe;
Ukuguqulwa (yangasese) kuphela ingasebenza ngcono imingcele ngazinye umkhiqizo noma ukukhiqizwa.
Ukwahlukanisa emisha kungabuye kwenziwe yi-degree of nokudlanga emisha. Ikakhulukazi, ngilahliwe futhi oqabukelayo kwenqubekela-phambili kwezesayensi ehlasela umzimba. Kuye emisha embili kungaba substitutional, khansela, openers yansukuzonke, retrovvedeniyami.
Yiqiniso, efakwe ohlwini izinhlobo ezintsha kanye ngezigaba zabo akuzona sokugcina futhi uzobe njalo enwetshiwe abuyekeziwe. Nokho, umuntu angalimisa ngesihloko elokuthi ukuthi kungakhathaliseki kulokho ensimini ayisebenzanga, inkampani njalo ngaye sizokwazi ukukhetha okusezingeni eliphezulu umkhiqizo ubuchwepheshe ezokwenza ngcono inzuzo yayo.
No kancane ezithakazelisayo futhi Ukwahlukaniswa amaphrojekthi ezintsha. Avame ziyahlukahluka kuye ezingeni ukubaluleka kwezesayensi nakwezobuchwepheshe. Ngakho, ukwaba sesimanje phrojekthi ezintsha, phakathi kwesikhathi lapho ukuthuthukiswa kwenzeka ushintsho olukhulu esakhiweni eziyisisekelo noma ubuchwepheshe. Innovative (noma ngcono) umsebenzi yesayensi evumela ukuba senze izinguquko ezinkulu esimweni ubuchwepheshe etholakalayo kanye nomklamo. Nokho, inzuzo enkulu kunazo zonke iwukwenza ukugcwaliseka kwezentengiselwano eziphambili nephayona phrojekthi ezintsha, okuyinto zifaka isethulo, ngokulandelana, okuholela ukuthuthukiswa lobuchwepheshe kanye izinto okudalwe, imiklamo nezinto zobuchwepheshe bayakwazi ukwenza imisebenzi emisha.
Meritocracy - kungcono ... Kuyini meritocracy. Umgomo we meritocracy
Radioactivity njengobufakazi bokusetshenziswa kwesihluku isakhiwo eziyinkimbinkimbi zama-athomu. Umlando ukutholakala, ucwaningo, izinhlobo radioactivity
Umqondo emphakathini kwabantu: ephuzwini eliyisisekelo umbono
Uvinjiwe isayithi - indlela ukuvula? Indlela yokuvula i-isayithi livinjelwe
Biography emangalisayo Alentova Ukholo
Ukupheka isobho Sorrel